Science of Neuropsychology - Indostria, Boky, Methods, Games and Exercises
Ny Neuropsychology - inona moa izany, ny fototra, ny toro-lalana, ny fitsipika
Ny fanabeazana momba ny neuropsychologie dia tanora sy fampivelarana ny siansa. Raha tsy mianatra ny fizotrany ao amin'ireo faritra simba ao amin'ny atidoha dia sarotra ny manampy ny olona iray hody amin'ny toeram-pitsaboana. Matetika ny ankizy no teraka noho ny fanitsakitsahana isan-karazany, ary ny neuropsychology dia manampy amin'ny famantatra izany amin'ny ambaratonga voalohany ary manamboatra drafitra fanitsiana.
Inona avy ny neuropsychology?
Ny foto-kevitra momba ny neuropsychology dia fironana tanora mbola kely, mitombo eo amin'ny fihaonan'ny neuroscience, psychology sy psychophysiology. Ny fandinihana ny fifandraisana eo amin'ny fiasan'ny atidoha sy ny fomba fisainana, ny fitondran-tena, ny neuropsychology. Amin'ny ankapobeny, ny fanandramana amin'ny ati-doha amin'ny tsy fahampiana vokatry ny ratra na aretina amin'ny olona sy ny biby dia notsaraina. Ny asa lehibe amin'ny neuropsychology:
Famantarana ny tsy fitovian'ny rafitra fiasan'ny atidoha amin'ny fifandraisana amin'ny zavamiaina miaina miaraka amin'ny tontolo ivelany sy anatiny.
Famotopotorana ny asan'ny orinasa sy ny rafitra.
Fandinihana ny fahasimban'ny faritra ao amin'ny atidoha.
Ny mpanorina ny neuropsychology
Ny dingana voalohany tamin'io fitarihana io dia nataon'ny L.S. Vygotsky, saingy ny fandraisana anjara manan-danja AR. Luria ary namorona siansa vaovao - neuropsychology. Ny zava-bita sy ny fandrosoana A.R. Luria:
namorona ny fanasokajiana ny aretina aphazika;
nianatra sy nanoritsoritra ny tsy fahazoana miteny tsy fantatra teo aloha;
dia nandalina ny anjara asan'ny lava-bavaky ny atidoha amin'ny fomba fiasa ara-tsaina.
Ireo fomba fijerin'ny neuropsychology, ahafahana mamantatra ny fandikan-dalàna (novolavolan'i AR Luria sy ny mpanara-dia azy):
Fomba fandalinana ny rafi-pitilanana (fitsaboana labiera Luria) - fandalinana tanteraka ny asa ara-tsaina
Psychometric (Amerika avaratra) - fitsapana amin'ny pilina Nebraska-Luria, Wexler.
Fomba fitsaboana manokana (britanika) - fitsapana, fitsirihana amin'ny fanaovana fitiliana ho an'ny fianarana samihafa.
Indostria momba ny neuropsychology
Mihamitombo haingana ny neuropsychology, mino ny mpahay siansa fa io siansa io no ho avy. Ny lalam-pitantanana ny neuropsychology:
ny tontolo iainana;
neuropsychology of development.
Ny "neuropsychologie" amin'ny fahazazana - ny fampanantenana sy ny fitarihana fitadiavana, ny fanitsakitsahana amin'ny fotoana mety dia hanampy amin'ny fanatanterahana fanitsiana iray manan-kery ilay zaza. Ny fikarohana momba ny neuropsychologie momba ny zaza tsy ampy taona dia mandinika ny asymmetria amin'ny ankapobeny sy ny hemispheres havia, ny antony mahatonga ny tsy fahombiazan'ny fianarana (aretina kely amin'ny ati-doha, ADHD syndrome). Rehefa hita ireo fanitsakitsahana, dia atao ny fanitsiana ara-tsaina sy ara-pahasalamana.
Ny fototry ny neuropsychology dia ny fandalinana ireo sendikan'ny neuropsychological. Ny neuropsychology momba ny klinika dia miresaka ny marary amin'ny ratra mahazo ny hemisphere havanana sy ny fanitsakitsahana ny rafitra atidoha lalina, ary koa ny tsy fahampian'ny fiaraha-miaina amin'ny fifandraisana. Ny foto-kevitra fototra momba ny neuropsychology momba ny klinika:
Neuropsychological symptoms . Fanitsakitsahana ny asan'ny psyche amin'ny fahasimban'ny atidoha eo an-toerana.
Neuropsychological syndrome . Ny marika sasany amin'ny soritr'aretin'ny neuropsychological noho ny fampihenana ny fiasan'ny fizotry ny saina ao amin'ny lesona eo an-toerana.
Ireo fitsipika momba ny neuropsychology dia mifototra amin'ny fampiharana ny fomba fanao mahazatra sy ny fanandramana, raha tsy misy ny science no afaka manamarina ny toetrany. Ny neuropsychology experimental dia mandinika ny fitondran-tenan'ny olombelona sy ny biby izay misy lozika eo an-toerana. Misaotra ny fanandraman'i A.R. Luria dia nodinihina tsara sy nosakanana ny aretin'ny fahatsiarovan-tena (aphasia) sy ny kabary. Ny fandinihana ny neuropsychology amin'ny fanandramana amin'izao fotoana izao dia mandika ny fanitsakitsahana ny fepetra ara-pihetseham-po sy ny fizotry ny saina.
Ny torolalana momba ny neuropsychology dia mitombo amin'ny vokatry ny fomba mahomby. Ny neuropsychology mahazatra dia ny fizarana izay mifototra amin'ny sampana hafa momba ny neuropsychologie. Ny fomba fiasa lehibe dia napetraky ny A.R. Luria ary nahazo ny anarana hoe "Batteries of the Lurian method", izay ahitana ny fikarohana:
fisarihana an-tsitrapo sy tsy miangatra;
hetsika rehefa manatanteraka torolàlana;
fitantanana ny kaonty;
Inona no atao hoe neuropsychologie taona - ny valiny dia efa mipetraka ao amin'ny fanontaniana ihany. Ny vanim-potoana tranainy dia mifanaraka amin'ny fomban'ny fivoaran'ny saina, ary mandritra ny vanim-potoana iray, dia misy toetra mampiavaka ny atidoha izany. Fianarana momba ny neuropsychologie taona:
Ny soritr'aretina momba ny fanitsakitsahana ny andraikitra ambony ambony.
Neuropsychology - Fanatanjahan-tena
Amin'ny toe-javatra mahazatra, mandamina ny atidoha ny atidoha, miaraka amin'ny fanitsakitsahana ny fandanjana ara-psikolojika, dia tsy mahomby ny fisongan'ny olana amin'ny psyche, fandaharanasam-pandaminana ara-potoana, ny fanitsiana ara-potoana. Ny fanavaozana ny neuropsychologie momba ny zaza sy ny olon-dehibe dia mampiasa fomba amam-panao samihafa izay ilaina amin'ny fampiasana ny atidoha, ny fahasalamana. Neuropsychology - lalao sy fampiharana:
Mirindra sary . Manomàna taratasy kely, marika na pensilihazo. Raiso ny pensilihazo amin'ny tanana roa ary atomboy miaraka amin'ny tànanao izay tianao rehetra: litera, tarehimarika geometrika, biby, zavatra. Mampihetsi-po ny hemispheres ary mampisy ny fialam-boly.
Mamorona endrika samihafa . Ny fampiharana dia mitovy amin'ny teo aloha, ary ny fisoratana anarana samihafa ihany koa, ohatra, ny tanana havia dia manamboatra angona telo, ny tanana havanana dia manisy kianja.
Ny fisaintsainana dia ny fifantohana amin'ny fofonaina . Atao tsy fahampian-tsakafo sy fisavoritahana lava, ary mifantoka amin'ny tendron'ny orona. Miala sasatra, mandray ny atidoha eo amin'ny ambaratonga amin'ny alfa rhythm, mionona ny saina, mitombo ny toe-piainana ara-tsaina.
Famolavolana ny hetsika isan-karazany . "Ny Go Goes" - ny ankizilahy dia eo amin'ny elatra rehetra ary manangana ny sandriny havanana sy ny legany, ny maso mifantoka amin'ny tanany, avy eo ny hetsika mitovy amin'ny havia eo amin'ny vatana. "Tonga ny Tiger" - ny toerana fototra eo amin'ny vodin-tsoa rehetra, miovaova: ny tanana havanana dia miankavanana, ny havia havia havanana ary mivezivezy manodidina.
Manaova "Elefanta" . Ny sofina dia natsipy mafy tamin'ny soroka, ny tanana mifanohitra aminy dia mivoaka toy ny "kofehy" ary manomboka manjono valo eo amin'ny rivotra, ary ny maso manaraka ny rantsan-tongotra. Mihazakazaka in-3 ka hatramin'ny in-5 eo ho eo. Ny fanazaran-tena dia manafaizana ny rafitra "saina-tsaina".
Neuropsychology - aiza no hianarana?
Ny fampiofanana momba ny neuropsychologie dia natao noho ny fanabeazana ara-psikolojika na ara-pitsaboana, anisan'ny nahazo fianarana, klinika na psikolojia ara-pitsaboana, psychoneurologista, mpitsabo aretin-tsaina. Fampianarana ambony, izay ahafahanao mahazo ny asan'ny neuropsychologe:
Institut de Psychoanalyse. Fanabeazana "Fampiofanana momba ny fanavaozana ny fanavaozana ny fanavaozana ny fanavaozana ny fahasalamana sy ny fanabeazana".
University of St. Petersburg. Fakan-kevitra momba ny fitsaboana ara-pahasalamana.
St. Petersburg Scientific Research Institute. VM Spondylitis. Amin'ny fototry ny fahaiza-manao "Clinical (medical) psychology" sy "Neurology" mampianatra ny fototry ny neuropsychologie, neurotherapy.
National University University of State Research. Psychology Clinical.
Panjakana. MV University of Lomonosov ao Moskoa. Specialization "Neuropsychologie et neurorehabilitation."
Neuropsychology - boky
Boky malaza momba ny neuropsychology dia nosoratana tamin'ny fiteny tsotra, ary mety ho liana amin'ny olona rehetra liana amin'ny atidoha sy ny psyche amin'ny ankapobeny. Ny olona iray dia izao tontolo izao manontolo, momba ny fomba amam-pahaizana, ny antony mahatonga ny hafetsena amin'ny fitondran-tena hitranga mandritra ny androm-piainan'ireto orindrahindran'ny ati-doha hafa ireto: ireo tompon'andraikitra manolo-tena hianatra ny psyche ao amin'ny asany dia miresaka momba izany sy ireo zavatra maro hafa:
" Fundamentals of Neuroscience " Luria A.R. Fampiofanana ho an'ny mpianatra momba ny psikolojia, ny psikatrique ary ny tsy fahasalamana.
"Ilay lehilahy naka ny vadiny ho an'ny satroka " O. Sachs. Mahavariana ilay mpanoratra, saingy mitandrina sy manaja ny marary ny tantaran'izy ireo amin'ny ady amin'ny aretina mafy amin'ny psyche (neuroses). Ny marary Oliver tsirairay dia tsy manan-tsahala amin'ny fombany amin'ny fikasany hanorina fifandraisana eo amin'ny atidoha sy ny fahatsiarovan-tena.
" Hoy ny atidoha. Inona no mahatonga antsika olombelona " Ramachandran Ireo tsiambaratelo tsy takatry ny atidoha, ao anatin'ity asa mpamaky ity dia miandry ireo fanontaniana ny valiny: maninona no manoratra sary manoatra ny an'i Leonardo Da Vinci sy Michelangelo ny zaza iray, na misy fihetseham-po sy hatsaran-tarehy ao amin'ny atidoha.
" Ao amin'io onja io ihany. Neurobiology ny fifandraisana amam-panahy "E. Banks, L. Hirschman. Ny boky dia mitantara momba ny fomba amam-borona efatra, amin'ny fampivelarana izay olona mifanentana amin'ny olon-kafa ka mametraka tony, hery, fanekena ary resonance.
" Ny atidoha sy ny fahasambarana. Mystery of Modern Neuroscience »R. Hanson, R. Mendius. Ny firafitry ny boky, ny fitambaran'ny psikolojia sy ny neurologie, dia betsaka ny fomba fanatsarana ny tena.
Neuropsychology - zava-misy mahaliana
Ny sianseran'ny manam-pahaizana momba ny neuropsychology, sy ny fomba maro samihafa, rehefa mandalina ny toetra amam-panahy sy ny asan'ny atin'ny zavamananaina iainana, dia mitazona foana ny zava-baovao mahaliana. Ireto misy sombiny amin'izany:
Mianatra ny tenany ny atidoha.
Mandritra ny fitondrana vohoka, dia mitombo in-250.000 ny isan'ny neuron.
Ny olona dia mampiasa loharanom-pahalalana be loatra amin'ny famahana ny olana araka izay ilainy amin'izao fotoana izao, noho izany dia tsy voamarina ara-tsiansa ny angano momba ny fampiasana afa-tsy 10% amin'ny atidoha.
Ny fahatsiarovan'ny olombelona dia tsy manaiky ny fomba fisainana sy ny lojika, ary mba hahatsiaro tsaratsara kokoa ny filazam-baovaon-danja rehetra dia zava-dehibe ny mamorona sary, manangana ny andiam-panohanana - ka ny fampahatsiahivana no ampiofanina.
Raha mifoka sigara ny atidoha, dia tsapan'ny atidoha ny mikotôn ho toy ny fitarihana amin'ny fisainana sy fampihenana ny famokarana entona anatiny mifehy ny fisainana, fa rehefa mitombo ny enta-mavesatra dia manomboka mamokatra betsaka kokoa ny atidoha, miseho ivelany izy rehefa manomboka mifoka sigara ho 2 sakany isan'andro (mampitombo ny doka nikôtinina) - miaina fahazarana.
Ny fahaketrahana manika - ny antony sy ny soritr'aretin'ny marary saina
Ahoana no hanaisotra ny fahatsapana ho meloka?
Tahotra ny sehatra
Puppy German Shepherd - fikarakarana sy fanabeazana
Famonoan-janaka amin'ny ankizy
Ahoana no hanamboarana vary orza amin'ny garazy?
Kiraro ririnina ho an'ny vehivavy Ecco
Ahoana no fomba fitondran'ny zazakely?
Trondro, trondro ao anaty multifariate
Fanalana zaza tsy ampy taona
Voanjo 5 minitra
Mpitarika Trump Hope Hicks nanaloka ny vadin'ny filohan'i Etazonia tamin'ny fanasana governemanta tao Japana
Hazo fisaka miaraka amin'ny menaka